Itoobiya oo ku dhawaaqday qorshe muujinaya inay si cad ugu malabsanayso badaha Somalia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Itoobiya oo ku dhawaaqday qorshe muujinaya inay si cad ugu malabsanayso badaha...
Itoobiya oo ku dhawaaqday qorshe muujinaya inay si cad ugu malabsanayso badaha Somalia
(Addis Ababa) 02 Juun 2022 – Itoobiya ayaa ku celisey inay door hoggaamineed ka qaadanayso wax ay ku sheegtay ”Hindisaha Badda Cas” oo lagula dagaalamay burcad-badeedda gobolka Bariga Afrika.
Taliyaha Booliiska DF Itoobiya, Demelash Gebremichael ayaa ka qayb galay shir ay soo qaban qaabisay hay’adda booliiska saldhigga ah ee INTERPOL oo la sheegay in lagu qiimaynayey Hindisaha Badda Cas (Red Sea Initiative).
Mas’uuliyiinta la sheegay inay qaabishan Hindisaha Badda Cas ayaa warbixin xog-siin ah siiyey Jen. Demelash oo uu uga sheekeeyey hawlo aad u adag ee lagu fulinayo mashruuca dalladdan, sida hadalka loo yiri. Jen. Demelash, ayaa dhankiisa bogaadiyey doorarka Hindisaha Badda Cas oo uu ku tilmaamay mid sare u dhigaya ilaalin iyo kahortagga burcad-badeedda gobolka.
Waxa uu sheegay in Itoobiya ay aad ugu dadaalayso sidii ay wax uga qaban lahayd tahriibinta hubka iyo dadka. Wuxuu kaloo intaa ku daray in Itoobiya ay sanadka 2023-ka la wareegi doona xilka guddoomiyaha xiriirka Booliska Bariga Afrika (EAPCCO), isagoo caddaynaya inay qarankiisa ka go’an tahay inay hormuud ka noqdo la dagaallanka burcad-badeedda Badda Cas iyo guud ahaan gobolka.
Itoobiya ayaa ah dal bad-xiran ah mana la yaqaanno sababta ay uga hadlayso bado aysan xuduud la lahayn, sidoo kale ma jiraan wax kiisas ah oo la taaban karo oo burcad-badeed la xiriira oo haatan laga soo sheegayo xeebaha Badwaynta Hindiya walaa Badda Cas, iyadoo dabcan ka hadlaysa Badda Cas dhanka Somalia.
Itoobiya ayaa horay u lahaan jirtey Ciidamo Badeed oo la oran jirey Imperial Ethiopian Navy kuwaasoo la dhisay 1955-kii iyagoo saldhigan jirey magaalada Musawac ee dalka Eritrea, balse waxaa la kala diray 1990-meeyadii.
Yeelkeede, Itoobiya ayaa haatan quud-darraynaysa inay saldhig ka dhigato dalka ay colka soo jireenka ahaayeen balse haatan cujuqa cidaha u qaybsamay noqday ee Somalia, iyadoo gacan ka heleysa cududo caalami ah oo abid caymin jirey sida Faransiiska, Maraykanka iwm.
Previous articleIngiriiska oo qiray in cudur halis oo si wayn ugu faafaya uu u badan yahay dadka isku jinsiga ee isu taga
Next articleDal Ukraine siinaya gantaalo uu Ruushku horay uga digey in dalkaa la siiyo + Sawirro (Nooca & tiiradooda)